Gabatee filatamaaf, dirqalaawwan hamamtaa, qubannoo, hiriiraa, addaan fageenyaa ifteessi.
Gabateedhaaf maqaa dhokataa tokko galchi. Maqaa kana akka gabatichi Naanna'aa keessaa atattaammaan argattu itti fayyadamuu nidandeessa.
Bal'na gabatichaa galchi. Sanduuqnii filannoo kun kan jiraatuu, yoo dirqali Ofumaa, iddoo Hiriira keessatti hinfilatamne qofa.
Bal'na gabatichaa kan bal'ina fuulaa akka dhibbeentaa tokkootti agarsiissa.
Dirqalaawwan hiriiraa gabaticha filatameef qindeessi.
Surdalaan gabatee, gara bitaa fi gara mirgaa muudanawwan fuulaatti bal'isa. qindaa'ini kun gabateewwan galmeewwan HTML keessaatiif fudhatamma qaba.
Qaree bitaa gabatee muudana fuulaa bitaatti hiriirsa.
Qaree bitaa gabatee gara galumsa isa ati saanduqa Bitaa iddoo Addaan fageeyna keessatti galchitte hiriirsa.
Qaree mirga gabatee muudana fuulaa mirgaatti hiriirsa.
Fuula irratti gabatee sardalaan wiirtessa.
Gabatee, gatiiwwan iddoo sanduuqawwan Bitaa fi Mirga keessaa Addaan fageenya keessaa irratti huundaa'uun ofumaan hiriirsa. LibreOffice ofumaan bal'ina gabaticha heerega. Yoo barbaadde dirqala bal'ina tarjaa filachuun, mata mataa isa ifteessuu nidandeessa.
Hamma iddoo duwwaa qarree mirga mudana fuulaa fi qaree barruu gidduutti dhiisuu feetu galchi. Dirqalii kun, yoo Ofumaa yk dirqalii Bitaa, iddoo Hiriira keessaa filatamee, jiraachuu hindanda'u.
Hamma iddoo duwwaa qarree mirga mudana fuulaa fi qaree barruu gidduutti dhiisuu feetu galchi. Dirqalii kun, yoo Ofumaa yk dirqala Mirga, iddoo Hiriira keessaa filatamee, jiraachuu hindanda'u.
Hamma iddoo duwwaa qarree gubbaa gabatee fi barruu qaree gubbaa gabatee gidduutti dhiisuu feetu galchi.
Hamma iddoo duwwaa qarree gadii gabatee fi qaree barruu gadii gabatee gidduutti dhiisuu feetu galchi.